I-China Premix Glass Beads BS6088A Ukuveliswa kunye neFektri | OLAN
Ukumakishwa kwendlela zezinye zezona ndlela zisebenzayo nezinoqoqosho zokukhokela ngokukhuselekileyo ukugcwala kwabantu. Umahluko phakathi kwepavumente kunye nombala wezinto zokumakisha zinika ukubonakala okucacileyo kwemigca phantsi kweemeko zemini.
Kuphela kuhlanganiswa ubuhlalu beglasi obulungileyo beempawu ezibonakalayo, ukumakisha kwendlela kuya kuba yinto ebonakalayo yokhuseleko ebusuku. Ubungqina beglasi busetyenziswa kwizinto zokumakishwa kwepavumente ngenye yeendlela ezintathu. Zingabekwa kwindawo yokumakisha ngaphambi kokufakwa kwesicelo, okanye zinokuphoswa okanye zifuthwe kwipeyinti emanzi ngqo emva kwesitshizi sokupeyinta, okanye isahlulo sinokuphoswa kwi-epoxy enamacala amabini okanye izinto ze-thermoplastic. Umgangatho ophezulu weentsimbi uhlanganiswe yipeyinti, kunye nesenzo sokuqhafaza kwepeyinti ekhuphukela phezulu ngentla embindini webhedi. Oku kubonelela ngamanyathelo amabini. Ikhiya ubuhlalu beglasi kwipeyinti kwaye ivumela ipeyinti ukuba isebenze njengombonakalo obonakalayo wobuso bokubuyela umva, ngombala wepeyinti ochaphazela umbala wokukhanya okubuyiselweyo. Ukukhanya okungena kwiglasi yeglasi kugobile kwaye kugxilwe ngasemva kwebhedi kwaye kubonakalise ukubuyela ngasemva kwizibane zangaphambili kunye nomqhubi.
Inkangeleko: Icocekile, iyabonakala, akukho kungcola kuqinisekileyo
Ukwakhiwa: Iglasi yekalika yesoda
Ukuxinana: 2.4-2.6g / cm3
Isalathiso sokubonisa: 1.7
Ukujikeleza: I-80% (600 <Sieve size <850um, spherical beads> 80%)
Umxholo SiO2> 68%
Ubunzima (Moh's): 5-7
Egqithileyo Drop On Glass Beads EN1423
I-Glass Microspheres (i-OLH-D)
I-Glass Microspheres (OLH-A)